Imibhalo kaTom Treanor mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge UTom Treanor
UTom Treanor uyiChief Marketing Officer kwaTreasure Data, lapho aqwashisa khona ngesisombululo senkampani iCDP (platform data data) yenkampani. UTom uthole i-MBA eWharton School of Business, kanye ne-Master of Arts in International Studies evela e-University of Pennsylvania.
Izinyathelo Ezi-6 Zokuthola Ipulatifomu Yedatha Yamakhasimende (CDP) Nge-C-Suite Yakho
NgoLwesibili, Novemba 10, 2020 NgoLwesithathu, Novemba 11, 2020 UTom Treanor
Kungaba lula ukucabanga ukuthi esikhathini samanje esesabekayo esingaqinisekisi, ama-CxOs awakulungele ukwenza imali enkulu ekuthengiseni okuqhutshwa idatha nokusebenza kwenkampani. Kepha okumangazayo ukuthi basenentshisekelo, futhi kungahle kube ngoba bebevele belindele ukwehla kwamandla omnotho, kepha ithemba lemivuzo yokuqonda inhloso nokuziphatha kwamakhasimende kwakubaluleke kakhulu ukuthi ungayinaki. Abanye basheshisa ngisho nezinhlelo zabo zokuguqulwa kwedijithali, ngemininingwane yamakhasimende okuyingxenye emaphakathi ye-